आँधीहुरी विपद्‍मा मृतकका परिवारलाई धर्मसंकट : संस्कार मान्ने कि मेसमा खाने ?
बारा (भरवलिया) – बारामा आएको आँधीहुरी विपद्को उचित व्यवस्था हुन नसक्दा प्रभावित परिवार अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
बढी प्रभावित बारा जिल्लाको फेटा गाउँपालिका–१ भरवलियामा अझै पर्याप्त राहत पुगेको छैन । आम प्रभावितले पर्याप्त राहत नपाएको अवस्थामा मृतक परिवार धर्मसंकटमा परेका छन् ।
आँधीहुरीमा निधन भएकी ५२ वर्षीया बरियादेवी रामको परिवार आशौच बारिरहेको छ । आशौच बारिरहेका बेला घरमै अन्न पकाएर खानुपर्ने संस्कार अनुसार परिवारमा संकट आइलागेको छ । ‘घरको सबै अन्न हावाहुरीले नष्ट परेको छ,’ रामका छोरा सिकिन्दरले भने, ‘बाहिरको अन्न खानु हुँदैन भन्छन्, घरमा केही छैन ।’
घरभित्र कसैको पनि मृत्यु नभएका परिवारले गाउँमै सामूहिक रुपमा (मेस) खानपान गरिरहेका छन् । तर मृतक परिवारले संस्कारलाई मान्दै मेसमा खान सकिरहेका छैनन् । ‘२ दिनदेखि खाना नै खाएका छैनौं । हाम्रो १२–१३ जनाको परिवार छ,’ सिकिन्दरले भने, ‘हामीलाई तत्काल राहत उपलब्ध भए घरमै पकाएर खान हुन्थ्यो । अन्न नभएर गाह्रो भएको छ ।’
संघीय समाजवादी फोरम नेपालको बारा जिल्लाका कार्यवाहक अध्यक्ष अजयकुमार पटेलले गाउँमै मेस चलाएका छन् । मेसमा आँधीहुरी प्रभावितलाई निःशुल्क खाना वितरण भइरहेको छ ।
आँधीहुरीमै परेर स्थानीय ४५ वर्षीया मनोरमादेवी कुर्मीको पनि निधन भयो । मनोरमाका पति रामबाबु राउत कुर्मीले परिवारका सदस्य र बालबालिकालाई खान–बस्नको समस्या रहेको बताए । ‘कमसेकम त्रिपाल चाहियो । खानादेखि बस्नसम्म ठूलो समस्या छ,’ उनले भने ।
छरछिमेकाका बालबालिका र वृद्धवृद्धाले मेसमा खाना खाइरहेका बेला मृतक परिवारमा भने धर्मसंकट छ । सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा राहत बाँड्न सकेको छैन । स्थानीय तहले चाउचाउ–चिउरा दिएपछि एकैछिनमा सकिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
वृद्धवृद्धा पनि समस्यामा
हावाहुरीले घरवार नष्ट गरेपछि ७० वर्षीया मायादेवी पटेललाई गाँस–बासको समस्या छ । ‘कतै राहतै–राहत गएको सुनिन्छ, हामीलाई बिस्कुटसम्म छैन,’ उनले भनिन् । स्थानीय बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म राहतको पर्खाइमा छन् ।
स्थानीय ५५ वर्षीय रामस्वरुप राउतलाई खान नपाएको सँगसँगै लुगाकपडा फेर्न समेत समस्या परेको छ । ‘छोराका लुगा लगाएर बस्नुपरेको छ, आफ्ना लुगा सबै हावाहुरीले सखाप गरिदियो ।’
स्थानीय रामसिंह पटेलले गुनासो गरे, ‘हाम्रो टोलमा एउटा बिस्कुट पनि आएको छैन । सुगम ठाउँमा राहत गएको छ ।’ आँधीहुरी आएर तहसनहस गरेको २ दिनसम्म पनि सरकारले राहत नदिएकाले प्रभावित परिवार आक्रोशित छन् ।
करोडौं आम्दानी गर्ने जानकी मन्दिरले ८३ लाख विद्युत् महसूल तिर्न...
डेढ वर्षदेखि कार्यालय सहयोगीको भर, सेवाग्राहीलाई हाकिम खोज्दै...
गुठी जग्गामा बनेको धर्मशालामा भारतीयको रजाइँ, ९३ वर्षदेखि भा...
नोटबन्दी र जीएसटीको प्रभाव : जागिरबाट धमाधम हात धुँदै भारतम...
स्तम्भकार रिजाललाई मातृशोक
सिर्जनाका छोरा प्रसिद्धसँगको सेल्फी राख्दै बिनाले लेखिन्, ‘ह्याप्पी बर्थ डे छोरा प्रसिद्ध’
नेकपाले मात्र कालापानी फिर्ता गर्न सक्छ : नारायणकाजी
कालापानीको पक्षमा प्रदर्शन गर्न पनि नपाइने हो सरकार ?
मल्टिमिडिया तथा मोबाइल पत्रकारिता तालीम सम्पन्न
हङकङमा विरोध प्रदर्शनपछि भएको फोहर हटाउन सडकमा आयो चिनियाँ सेना (भिडियो)
बेनीघाटमा रोकिराखेको ट्रकमा ग्यासकाे बुलेट ठोक्कियो, सडक एकतर्फि सञ्चालनमा